I-27 CSS kunye ne-HTML izilayidi zokuthelekisa imifanekiso, amakhadi kunye nokunye okuninzi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Siyaqhubeka nomjikelo we-CSS kunye nekhowudi ye-HTML enokuthi isebenze kwiwebhusayithi yethu ukuyinika olo hlobo lubalulekileyo lokwahlulahlula kwezinye. Enkosi ku + c ulawulo kunye + v ulawulo esinako Ikhowudi yethu yesandla eya kwenza ukuba iwebhu ilunge ukuba ipapashwe kuphuhliso emva kokuchitha iintsuku okanye iiveki kuvavanyo.
Ngoku lixesha lezilayidi ezingama-27 kwi-HTML kunye ne-CSS eya kusivumela ukuba silungiselele eso sithuba apho sihlala sidibanisa umxholo omninzi kwiiphikseli ezimbalwa ezisisikwere. Ezi zityibilikisi zivela ekhadini, ukuthelekisa, isikrini esigcweleyo, ukuphendula kwaye elula, kodwa kwangaxeshanye intle kakhulu. Sihamba nesilayidi ezingama-27 ezingayi kushiya nabani na ongakhathaliyo, ngakumbi umthengi okanye umsebenzisi odlula kwiwebhusayithi yakho afunde umxholo, athenge imveliso okanye asebenzise isilayidi sokuthelekisa ukuthelekisa umfanekiso ngaphambi nasemva.
1 Izikrini kumakhadi
2 Isilayidi sekhadi lolwazi
3 Uthelekiso lwesilayidi somfanekiso
5 Uluhlu lwesithathu lwesilayidi sokuthelekisa
6 Isilayidi somfanekiso weVanilla JS
7 Yahlula-hlula isikrini ngokuchanekileyo
8 Isilayidi esigcweleyo
9 Isilayida esithe tyaba kunye neparallax
10 Smooth 3D umbono wesilayida
11 IHero esigcweleyo isilayidi
12 Isilayida seVELO.JS esinemida
13 Isityibilikisi esithe nkqo seCSS ngezithonjana
14 Isilayidi somfanekiso weblackbox
15 I-Blur yeMotion kunye neefilitha zeSVG
16 Isilayidi esimnyama
17 Isilayidi somfanekiso kunye neepateni ze-SVG
18 Isilayidi esilula
19 Isilayidi esinyulu seCSS
20 Ikhekhe kuphela isilayida seCSS
21 Isiphumo sesandi sesilayidi
22 Isilayidi sesilayidi
23 Isilayidi iNew York
24 Ukuphuma kwesilayidi
25 Isilayidi esineziphumo ezibi
26 Isilayida esinomboniso womfanekiso
27 Izilayida utshintsho
Isilayidi sekhadi lolwazi
Uthelekiso lwesilayidi somfanekiso
Esi sisilayidi Iluncedo olukhulu Ngokuqinisekileyo uyibonile kuninzi lweewebhusayithi apho ngaphambi nasemva kweefoto ngokuthelekiswa nebha ethe nkqo ethe tyaba ngokuthe tye. Luncedo olukhulu kuthelekiso, ke siyenzile enye yezinto ezibalulekileyo kolu luhlu lwezilayida.
Uluhlu lwesithathu lwesilayidi sokuthelekisa
Isilayidi somfanekiso weVanilla JS
Yahlula-hlula isikrini ngokuchanekileyo
Isilayida esithe tyaba kunye neparallax
Ku abalandeli befuthe leparallax kule slider ngeSwiper.js, HTML kunye neCSS. Ngaphandle kokukwazi ukutyibilika kunye namaqhosha amabini abekwe kwicala ngalinye, kwicala lasekunene sinayo yonke imifanekiso ye-carousel epheleleyo encinci. Isilayidi esibonwayo esahlukileyo nesikumgangatho ophezulu esingayi kushiya nabani na undwendwela iwebhusayithi yethu engenamdla.
Smooth 3D umbono wesilayida
IHero esigcweleyo isilayidi
Isilayida seVELO.JS esinemida
Enye yezona zinto zibalulekileyo njengesilayidi esigcweleyo kunye nopopayi lotshintsho olumnandi. Sicebisa ukuba uye kuyibona isebenza ukuze uqalise ukucinga ngendlela yokuyisebenzisa kwiwebhu. Sebenzisa iziphumo zeVelocity Ukuphucula oopopayi abasebenzisa amaqhosha atolo, cofa kwindawo yokukhangela kunye nokuskrola, ngokugqibeleleyo.
Isityibilikisi esithe nkqo seCSS ngezithonjana
Siqhubekela kwizilayida Ukuphendula kweCSS kwiselfowuni umgangatho omkhulu njengalo. Uya kuba noluhlu lwezithonjana ngasekunene xa ucinezelweyo ukuqala upopayi ngokuwa nkqo. Umphumo omkhulu osebenzisa kuphela i-CSS ukushiya isilayidi sezona zilungileyo kuloluhlu.
Isilayidi somfanekiso weblackbox
I-Blur yeMotion kunye neefilitha zeSVG
Isilayidi somfanekiso kunye neepateni ze-SVG
Olunye lolo vavanyo oluzama thwala iipateni ze-svg ukwenza imifanekiso yemaski kwisilayidi seCSS. Ivelisa isiphumo esimangalisayo sokufiphala ngokugqiba okukhulu. Omnye wabo batyibilikayo ukucaphukisa iimvakalelo ezilungileyo kwiindwendwe zewebhusayithi yethu.
Isilayidi esinyulu seCSS
Olunye lwezilayida ezilula olucocekileyo iCSS. Enye yeenzuzo zayo ukubeka emazantsi ashiye uthotho lwamachaphaza ezakusebenza njengamaqhosha ukufikelela kumfanekiso ngamnye oza kudlula phambi kwethu ngaphandle kopopayi olukhethekileyo.
Ikhekhe kuphela isilayida seCSS
El isilayidi esimnandi kakhulu kuluhlu kwaye ikwi-CSS kunye ne-HTML kuphela. Le yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kuluhlu lonke ukuba kwicala lasekunene ukwahluka kweekhekhe. Cofa kwenye kwaye ikhekhe libonakale ngoopopayi abamangalisayo abaphelela kwisiphumo esihle sokubhabha. Enye yezona zinto zilungileyo ngaphandle kwamathandabuzo.
Isiphumo sesandi sesilayidi
Un isilayidi sokutshintsha esisebenzisa iklasi elula yokongeza kwaye oko kuphawulwa ngoopopayi abagudileyo kakhulu ukuze ube yenye yeentandokazi kolu luhlu. Ukuba ufuna ukwahlula kuhlobo olushukumayo lwewebhu, yenye yezona zinto zibalulekileyo. Idibanisa kakhulu ngokubonakalayo.
Isilayidi iNew York
Nge isitayile esincinci esibonisiweyo apho icandelo ngalinye lomfanekiso liphuma nesilayidi ngasinye. Kuyile kakhulu kwaye kwahlukile kwinto ebonwa kuluhlu lwezilayida kwaye emi endaweni yayo.
Isilayidi esineziphumo ezibi
Isilayida esinomboniso womfanekiso
marbles I-GSAP inomboniso wezilayidi ezilandelayo eya kuziswa kumsebenzisi. Ukugqibelela kwimodeli kwiwebhusayithi yefashoni okanye yoyilo.
Siphetha uluhlu nge Isilayidi esikumgangatho ophezulu esinefuthe lokuqhushumba kunye noluhlu lweemifanekiso ezifumana loo nto ekhethekileyo kwiwebhusayithi yethu. Isiphumo se-parallax sinokusebenza.
Ungaphoswa yile Olunye uluhlu lweekhowudi zeCSS amaqhosha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Bugcisa » CSS » Iisilayidi ezingama-27 ze-HTML kunye ne-CSS ukunika iwebhusayithi yakho olo chukumiso lukhethekileyo
Funda indlela yokwenza izitayile zomlinganiswa kwi-Indesign kunye nokuhlekisa ngobungcali